Ihe egwuregwu 9 kachasị zoro ezo maka gam akporo | Gam akporosis
Aaron Rivas | 06/04/2021 16:00 | Ngwa gam akporo, Egwuregwu gam akporo
Ọtụtụ oge anyị na-ahụ onwe anyị oge ichere na ọ dịka enweghị ngwụcha, ọ bụkwa n’oge ndị ahụ ka egwuregwu ndị na-emegharị mmadụ anya na-eme ka anyị gbuo oge ọsọsọ. Maka nke a, ọ nweghị ụzọ kacha mma iji mee ya karịa iji ihe egwuregwu zoro ezo, na ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị nchịkọta a, nke ị ga-ahụ egwuregwu kachasị mma na ụdị ahụ maka gam akporo, ndị gị na ha ga-ekpori ndụ ma nwee ọ entertainụ.
Mgbe ahụ anyị ga-edepụta gị egwuregwu kacha mma zoro ezo dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google. Ha niile nwere onwe ha ma nwee ezigbo ewu ewu na ọtụtụ nbudata.
1 Ihe Omimi: Chọta Ihe ezoro ezo
2 Njem June - Ihe omimi na ihe ezoro ezo
3 Obodo Zoro Ezo: Ezigbo Ihe Adventure
4 Sherlock: Ihe Zoro Ezo
5 Nzuzo Nzuzo - Nzuzo Nzuzo
6 Ihe ezoro ezo: Mystery Coastal Hill
7 Ihe ndi nchoputa: Ihe omimi zoro ezo
8 Pearl's Peril - Egwuregwu Ezobe Ezo
9 Ihe ezoro ezo Cleanlọ nhicha - Egwuregwu Brain
Ihe Omimi: Chọta Ihe ezoro ezo
Anyị na-amalite ndepụta a na otu egwuregwu kachasị ebudatara na otu ya: Mystery Manor. Aha a nwere ihe karịrị nde 10 na nbudata na akara ngosi 4.6 na Storelọ Ahịa Play nke dabere na ihe karịrị 480 puku echiche na nkọwa, nke kachasị dị mma ma na-eto, ọ bụghị n'efu.
Isiokwu egwuregwu a nwere chọpụta ihe omimi na Mysterious Village, nke bu akuku ugha ebe ihe nile n’eme, n’otu oge nke ayi aghagh ichota ma choputa ihe nadigh agwusi nke ezoro ezo n’ebe akuku achoghi anya.
Nke a abughi nani egwuregwu nke ị ga-ahụrịrị ihe ma dozie ihe omimi, kamakwa otu n'ime ya ị ga-anwale nkà gị na ngwa ngwa uche gị. O nwekwara ọtụtụ mmadụ, ghosts, na nnukwu anụ nke na-enye egwuregwu ahụ mmụọ na isi okwu.
Bụrụ onye nyocha na Mystery Manor ma dozie esemokwu, mgbagwoju anya na ihe niile na - abịara gị, ebe ị na - anụ ụtọ eserese mara mma ma maa mma yana ụda na - enweghị atụ. Ihe ọzọ bụ na na-arụ ọrụ na-enweghị njikọ internetntanetị, ya mere i nwere ike ịkpọ ya oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Developer: Egwuregwu Egwu
Njem June - Ihe omimi na ihe ezoro ezo
Egwuregwu ọzọ dị egwu site na ụdị egwuregwu mgbagwoju anya, njem na ihe zoro ezo. Njem June ga-ewebata anyị oge dabere na 20s nwere ọnọdụ ngosi nke oge ahụ na ihe zoro ezo n'ebe niile.
Ihe niile na-emetụta ihe nzuzo ezinụlọ nke na-enye ọnọdụ dị omimi na nke na-akpali akpali na nyocha nke anyị ga-emerịrị iji dozie nsogbu na ịchọta ihe ndị anyị ga-achọta.
Na June njem, enweghị njedebe nke njem. Enwere mgbagwoju anya, nsogbu na ọtụtụ ihe ị ga-edozi n'oge niile, yana ọkwa a na-apụghị ịgụta ọnụ na ilu na-egosi ikike, ọsọ na ikike iche echiche nke onye ọkpụkpọ ọ bụla. Ọ bụ ya mere na, n'enweghị obi abụọ, bụ egwuregwu ọzọ dị egwu ịchọta ihe zoro ezo.
Obodo Zoro Ezo: Ezigbo Ihe Adventure
Ihe eserese nke egwuregwu dị oke mkpa iji nye ahụmịhe na-enweghị nke ọzọ, nke a bụ ihe zoro ezo City na-etu ọnụ, nnukwu egwuregwu zoro ezo ọzọ maka gam akporo.
O siri ezigbo ike iji ngwa ngwa mechaa ọkwa niile nke egwuregwu a, n'ihi na O nwere ihe karịrị iri asaa nke ihe zoro ezo nke siri ike ịchọta. Na mgbakwunye, o nwere ihe karịrị ọrụ 6.500 nke ị ga-emerịrị iji nweta ụgwọ ọrụ.
O nwekwara ihe karịrị 1.000 ọzọ iji mee, ihe odide 74 na-adọrọ mmasị nke ga-apụta n'oge mmepe nke egwuregwu ahụ na ngwụcha nke nyocha, mkpụrụedemede 15 dị egwu ị nwere ike ịchọta na minigames ndị dịnụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ụwa ebe enwere ọtụtụ ihe mgbe niile ime. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe kachasị mma iji soro ndị enyi na-akpakọrịta, nke a na-eme ka ọ tọkwuo ụtọ.
Developer: Egwuregwu G5
Sherlock: Ihe Zoro Ezo
Ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ịchọrọ ịbanye ụwa nke nchọpụta ihe zoro ezo na nchọpụta, kamakwa ịchọrọ inwe mmetụta dịka otu n'ime ndị nchọpụta kachasị ewu ewu na akụkọ ntolite, dị ka Sherlock Holmes bụ, nke a bụ egwuregwu maka gị.
Na egwuregwu a ị gaghị achọta naanị ọtụtụ narị ihe ndị zoro ezo na ndapụta dị iche iche nwere nsogbu dị iche icheỌ na-abịa na obere egwuregwu ebe ị ga-adakọ taịl, nyochaa ụwa, na ọganihu site na akụkọ na-akpali mmasị.
Ihe ngosi a dabere na uwa akwukwo akwukwo bu akwukwo ndi n’eji n’iru. E nwere gburugburu ebe ihe zoro ezo na-ezoro ezo n'ụzọ nke na ọ na-abụ ihe ịma aka nke ịchọta ha ngwa ngwa, na karia, ka arụchara ọrụ, nsogbu na-abawanye, nke na-eme egwuregwu a ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Na ị nwere ike ida ọtụtụ awa na awa.
Chọpụta ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na Sherlock: Ihe Zoro Ezo dịka Dr. Watson a ma ama.
Nzuzo Nzuzo - Nzuzo Nzuzo
Egwuregwu a zoro ezo bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị ma dị egwu nke ụdị ya. N'ime ya ị ga-esonye usoro ihe omimi na nzuzo, iji chọta ebe Richard, nwanne nna gị nọ na egwuregwu ahụ, ebe ọ bụ na agwa a apụla n'anya. Na mgbakwunye, ị ga-echedo nchekwa nke ndị ọkachamara, n'otu oge ị ga-agafe ụwa dị iche iche iji nwee ike mezuo ebumnuche.
Enwere ihe karịrị ọrụ 7.600 iji mee ma kwụsị ịkwụsị ịdọpụ uche gị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe 100 ịchọpụta, ọtụtụ ihe odide ị ga-achọpụta ka ị na-enwe ọganihu na egwuregwu ahụ, ọtụtụ minigames dị njikere iji mee ka ị nwee oge ọchị na ihe karịrị nchịkọta 1.200 nke ihe zoro ezo ịchọta.
Site na nbudata ihe karịrị nde 5, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 900 puku ihe na ntinye, na akara ikpeazụ nke 4.4 kpakpando na Playlọ Ahịa Google, o doro anya na egwuregwu a bụ otu n'ime ụdị ihe kachasị mma, yana otu n'ime ntụrụndụ kacha atọ ụtọ. Ọzọkwa.
Ihe ezoro ezo: Mystery Coastal Hill
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inye ya nsogbu ịma aka ndị na-atọ ụtọ ma jiri nwayọ nwayọ, Ihe ezoro ezo: Mystery Coastal Hill bụ ihe ọzọ dị mma maka gị. Ma ọ bụ na aha a na-enye ọtụtụ ọkwa nke ị ga-ahụ ihe ndị zoro ezo na mpaghara siri ike.
Mana nke ahụ abụghị ihe niile. Mepụta avatar ị ga - amata na egwuregwu ahụ ma mezie ụlọ ochie, mgbe ị na-aga ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri anọ nchọta ọchụchọ na idozi ọtụtụ mgbagwoju anya na ilu na a ga-eme na usoro 9 dị iche iche. E nwekwara akụkọ nwere ihe omimi dị egwu nke ị ga-achọpụta na usoro ọ bụla na ọganihu ị na-eme mgbe ị na-edozi nsogbu ndị a na-echere gị.
Ihe ndi nchoputa: Ihe omimi zoro ezo
Na-agafe ntakịrị ebe kwesịrị ekwesị ma dabere na oge ochie, anyị na-ahụ ihe ndị na-achọ ihe: Mystery Zoro ezo, egwuregwu na-akpọrọ gị a kediegwu na bụrụ ọnụ obodo jupụtara na narị otu narị nke zoro ezo ihe na ị ga-ahụ na njem gị, na ihe osise mara mma na ọtụtụ ihe odide ga-apụta ka ị na-enwe ọganihu site na egwuregwu ahụ.
Oru gi bu imebi onu nke obodo,, ka ị na-amalite njem na atụmatụ na-atọ ụtọ nke ukwuu yana akụkọ nwere ntụgharị na-atụghị anya ya nke ga-eme ka ị mikpuo na egwuregwu ahụ. Ọ bụkwa ya bụ aha a na-enye onyinye ihe karịrị 9.300 ọzọ dị njikere ime, nke ị ga - eji ọtụtụ awa na - agba mbọ idozi ya, yabụ, ọ na - arụ ọrụ dị ka mgbatị uche maka ịdị gara gara, nka na ọsọ.
Enwekwara ụda egwu mara mma nke ga - ejide gị site n'oge mbụ na ọtụtụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke, ọ bụrụ na ị dozie, ga - akwụghachi gị ụgwọ ihe ị nwere ike iji wee mee.
Pearl's Peril - Egwuregwu Ezobe Ezo
Pearl's Peril na-akpọrọ anyị gaa afọ ọlaedo nke 30s nke atụmatụ nke igbu onwe ya bụ ihe etiti ma na-ewere ọnọdụ n'ọtụtụ mpaghara, ebe ị ga-esi gafere ụwa iji chọta azịza ndị egosiri na, ma, mezie ihe mere.
O nwere ihe ngosi di egwu, nke ejiri aka ya weputa ya, na otutu odide ndi g’enyere gi aka nke oma. Hụ ebe dịka New York City, Paris, na kọntinent dịka Africa, nke bụ ebe a na-eme atụmatụ ahụ ma ị ga-achọta ọtụtụ narị ihe zoro ezo nke na-adịghị mfe ịchọta. Wepụta awa na awa na egwuregwu a ruo mgbe ị ga-edozi nnukwu ihe omimi. Ọ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, egwuregwu ọzọ dị egwu na ụdị ya, yabụ, anyị depụtara ya na mkpokọta a.
Ihe ezoro ezo Cleanlọ nhicha - Egwuregwu Brain
Egwuregwu a ị ga-ahụ ọgbaghara ebe niile n'ụlọ. N'ebe a, ka ị na-ehicha ma na-edozi ya, ị ga-ahụ ọtụtụ narị ihe zoro ezo nke zoro ezo nke ọma n'akụkụ niile nke ime ụlọ. Ma ọ bụ na ihicha ụlọ emetụbeghị ọ funụ, yana ọkwa ndị ga-esiwanye ike na ọtụtụ ndapụta ebe ị ga-enwe ọrụ ị ga-arụ.
Gamelọ egwuregwu ahụ na-ezo ọtụtụ ihe nzuzo, yabụ ị nwere ike ịhụ ihe ndị na-adịghị ahụkebe nke ị na-echetụbeghị tupu ha enwee ike ịda n'okpuru akwa ma ọ bụ n'azụ arịa. N'aka nke ya, aha a dị n'ọtụtụ asụsụ, nke gụnyere Spanish, na mgbakwunye na Bekee. Ọ bụ ezigbo agụmakwụkwọ na ezigbo nhọrọ maka ụmụaka ịkpa agwa gbasara ịtụ ụlọ.
Developer: Onyeka Onwenu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu egwuregwu kacha zoo 9 maka gam akporo
My trovas na ludojn interestj kaj chọrọ ka na-eche
Etu esi etinye asambodo dijitalụ na ekwentị gam akporo